June 2018 – Kalfadhi
Farmaajo oo soo dhaweeyay meel marinta sharciga naafada
June 30, 2018 June 30, 2018 Kalfadhi
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa soo dhaweeyay meel marinta sharciga naafada oo toddobaadkii hore ansixiyen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. ‘’ Waxaan ku bogaadinaya golaha wasiirada in ay meel mariyen hinside sharciyeedka shaqsiyaadka naafada ah. ‘’ Dadkeenna waxa ay innoogu fadhiyan qiimo isku mid ah,’’ ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter. Hindise sharciyeedkan ayay xukuumadda Soomaaliya hor geyn doontaa baarlamaanka si ay xildhibaannada iyo senatarada uga dooddan una meel mariyen. Sharcigan ayaa ku biiri doona sharciyo badan oo weli horyaalla baarlamaanka Soomaaliya.
Golaha wasiirada oo meel mariyay hindise sharciyeedka Naafada
June 28, 2018 Kalfadhi
Shirkii golaha wasiirada ee xukuumada Soomaaliya oo maanta qabsoomay ayaa looga hadlay dhowr arimood oo ay ugu muhiimsanaayen arrimaha amaanka iyo dhaqaalaha dalka. Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa shir gudoomiyay fadhigii maanta waxana uu ka warbixiyay safaradii uu ku kala soo bixiyay wadamada Ruwanda iyo Norway iyo madaxdii uu halkaasi kula so kulmay. Shirka inta uu socday waxa ay golaha meel mariyeen xisaab xirka miisaaniyada 2017ka oo wasiirka Maaliyada uu hordhigay mudanayaasha Golaha wasiirada. Sidoo kale golaha ayaa meel mariyay hindise sharciyeedka hay’adaha Naafada waxana soo diyaarisay wasaaradda haweenka…
Xildhibaan Xuseen Carab ciise oo ka hadlay sharciyo horyaalla baarlamaanka
June 27, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in ay weli baarlamaanka horyaalan sharciyo badan oo la doonayo in golaha shacabku ka dooddo si loo meel mariyo. Xildhibaanka oo wareysi gaar ah siiyay idaacada VOA ayaa sheegay in sharciyada ganacsiga,la dagaalanka argagixisada iyo sharciga xaqsiinta ciidamada iyo shuruuc kaleba in ay horyaalan golaha shacabka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa fasax galay ka hor maalmaha munaasabada ciidul Fidriga. Kaldhigan seddexaad ee golaha shacabka ayaa furmay bishii Maarso ee sanadkan ka hor inta uusan dhalan khilaafkii xilka looga…
Afhayeenka golaha shacabka oo la kulmay raysul wasaaraha Jabuuti
June 26, 2018 June 26, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti kula kulmay raysuul wasaaraha dalkasi mudane Cabdiqaadir Kaamil Maxamed. Labada masuul ayaa ka wada hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti iyo iskaashiga labada dhinac. Mudane Mursal oo maalintii labaad ku sugan dalka Jabuuti ayaa kormeer ku tagay xarunta baarlamaanka dalka Jabuuti. Dhinaca kale guddoomiyaha ayaa booqday dekado iyo xarumo dowladeed oo ku yaalla caasimada Jabuuti.
Xildhibaannada Galmudug oo ansixiyay in ay Cadaado noqoto xarunta Baarlamaanka
June 25, 2018 June 25, 2018 Kalfadhi
Xildhibaannada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta fadhigoodii caadiga ahaa ku yeeshey magaalada Cadaado iyaga oo isku raacey in xarunta baarlamaanka Galmudug si rasmi ah u noqoto magaalada Cadaado oo hadda xarun kumeel gaar ah u aheyd baarlamaanka iyo maamulkaba. Kulankan ayaa waxa soo xaadirey 46 xildhibaaan iyadoona cod aqlabiyad leh ay xildhibaannadu ku ansaxiyeen in ay Caadaado noqoto xarunta baarlamaanka Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle (Xaaf )ayaa horey u soo saaarey wareegto ku saabsaneyd xarunta baarlaaamanka Galmudug balse maanta ayuu si rasmi ah baarlaamkuna isugu raacay. Dhinaca…
Guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta u safray dalka Jabuuti
Afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti,sida ay qortay wakaalada wararka SONNA. Guddoomiye Mursal ayaa ka qeyb gali doona munaasabada maalinta xuriyadda Jabuuti,27 Juun, oo ah markii ay shacabka reer Jabuuti xuriyad ka qaaten gumeystihii Faransiiska. Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa toddobaadkan ku mashquulsan qaban qaabida toddobaadka xuriyada labada wadan. Xukuumadda Muqdisho ayaa berito xusi doonta maalinta 26-ka Juun oo ah markii ay gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ka xurooben gumeystihii Ingiriiska.
Ardayda gobolka Hiiraan oo maanta u farriistay imtixaanka shahaadiga
June 24, 2018 Kalfadhi
Ku dhawaad 1,400 oo arday ayaa maanta magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan u farriistay imtixaanka shaahaadiga ee dugsiyada sare oo ay soo diyaaarisey wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Wasaaradda waxbrashada ayaa dib ugu dhigtey imtixaankan kadib fatahaaddii webiga Shabeele. Wasiirka wasaaradda waxbarshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Aw Daahir ayaa shalay gaaray magaalada Beled Weyne si uu u kormeero habsami u socodka imtixaanaadka. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow oo la Hadley warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegey in maamulkooda ay diyaar u…
Xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug oo kulan ku yeeshay Cadaado
June 23, 2018 June 23, 2018 Kalfadhi
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta Baarlamaanka ee magaalada Cadaado. Kulanka oo ay soo xaadireen 46 mudane ayuu ajandihiisu ahaa in Wasiirada dowlad goboleedka Galmudug ay soo gudbiyaan sharciyada laga sugayo si loo dardargaliyo howlaha maamulka Galmudug. Kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug mudane Cali Gacal Casir. Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa dhawaan ka soo laabtay fasax waxaana weli horyaalla sharciyo muhiim ah oo u baahan in laga dooddo.
Soomaaliya ma u baahan tahay xilligan lacag cusub?
June 23, 2018 Kalfadhi
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shaaciyay in dowladdu soo daabacayso lacag cusub oo uu dalku yeelanayo kahor dhammaadka sanadkan. Waxay tani timid kadib markii hay’adda lacagta adduunka ay sheegtay inay taageerayso qorshaha lacagta cusub, waxayna ballan qaaday inay bixinayso kharashka ku baxaya oo ah inka badan 40 Milyan oo doolar. Taageerada IMF-ta iyo qorshaha dowladda ee lagu soo daabacayo lacag cusub waxay daba socdaan hannaan lagu qiimeynayo dhaqaalaha dowladda oo leh dhowr weji iyadoo dowladdu ka gudubtay wajigii 2aad ee barnaamijka kormeerka shaqaalaha dowladda ee SMP oo…
Madaxweyne Gaas oo maanta hortagaya baarlamaanka maamulka Puntland
Madaxweyne Cabdiweli Maxamedi Cali (Gaas) ayaa maanta la filaya in uu hortago baarlamaanka maamulka Puntland halkasi oo uu ka jeedin doono qudbad uu diirada ku saari doono arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanada Puntland. Doorashooyinka sanadkan ka dhacaya Puntland iyo xaalada deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayuu aad uga hadli doonaa madaxweyne Gaas,sida ay tabisay idaacada Risaala ee magaalada Muqdisho. Maamulka Puntland ayaa qorsheynaya qaban qaabada doorashada madaxtinimada oo ay sanadkan u taagan yihiin musharrixiin badan. Madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa kamid ah siyaasiyiinta u tartami doona xilka…